JABUUTI oo markale xirtay Xudduudaheeda, kaddib markii… | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh JABUUTI oo markale xirtay Xudduudaheeda, kaddib markii…
JABUUTI oo markale xirtay Xudduudaheeda, kaddib markii…
Jabuuti (Halqaran.com) – Jamhuuriyadda dalka Jabuuti ayaa mar kale xirtay xudduudaheeda, kaddib markii uu soo laba kacleeyey cudurka safmareenka ee Coronavirus (Covid-19) oo maalmihii la soo dhafay kiisas badan laga diiwaan geliyey dalkaasi.
Xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyadda dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle war ka soo baxay ayaa lagu sheegay in xadduudaha dhanka dhulka la xirayo muddo 15 maalmood, si loo xakameeyo faafitaanka Fayraska Karoona.
Dalka Jabuuti ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka Afrika ee uu sida ba`an ugu faafay Fayraska Karoona, balse deddaal ay dowladdu sameysay ayaa lagu sheegay inay yaraadeen kiisaska, muddooyinkii ugu dambeeyay.
Bilihii ugu dambeeyay xannuunka Coronavirus ayaa ka dabar go`ay dalkaas, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka.
Warbixintii ugu dambeysay ee wasaaradda ayaa lagu sheegay inaysan jirin kiisas cusub, islamarkaana dhammaan dadka uu ku dhacay ay ka bogsadeen. Balse shalay oo keliya ayay wasaaraddu shaacisay 30 kiis oo Fayraska ah, walow aysan faah-faahin halka ay kiisaskaasi ka yimaadeen.
Ugu dambeyn, dowladda Jabuuti ayaa ugu baaqday shacabka inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah, si loo xakameeyo cudurka safmareenka ah ee Covid-19.